इन्द्रस्थान कृषि सहकारी संस्था लि.को सातौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न « Harekpal
इन्द्रस्थान कृषि सहकारी संस्था लि.को सातौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौँ । काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १ स्थित इन्द्रस्थान कृषि सहकारी संस्थाको सातौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष बीरबल थापाले आगामी दिनमा एग्रोफोरेष्ट्रीजन्य व्यवसायमा संस्थालाई अघि बढाईने जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष थापाले कोभिड-१९ महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा संस्थाले नयाँ योजनामा काम गर्न नसके तापनि सदस्यको सम्पत्ति सुरक्षित गर्नेमा कत्ति पनि नचुकेको बताउनु भयो ।
साधारणसभामा शुभकामना मन्तव्य दिँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् चन्द्रागिरी-१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र के.सीले स्थानीय कृषकहरूलाई आधुनिकता तर्फ लैजाने र व्यवसायिक बनाउने कुरामा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने धारणा राख्नुभयो । बागमति प्रदेश सहकारी संघका सञ्चालक विपिन शर्माले सहकारी संस्थाले आफ्नो विषय केन्द्रीत कारोबारलाई बढाउने तर्फ सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
संस्थाका कोषाध्यक्ष किशोर कार्कीले संस्थाको कूल सम्पत्ति ४ करोड ७२ लाख ५७ हजार, चुक्ता शेयर पूँजी ८४ लाख ५ हजार लगानी ३ करोड ३२ लाख १३ हजार पुगेको र आ.व. २०७७-७८ मा आयकर व्यवस्था पछि ३ करोड ८२ लाख आमदानी गरेको जानकारी साधारणसभालाई दिनुभयो। इन्द्रस्थान कृषि सहकारी संस्थाले स्थानियस्तरमा कृषकहरूलाई कृषिकर्म र व्यवसायसँग सम्बन्धित वित्तिय तथा गैर वित्तिय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।